Mpivarotra: fantaro ireo fihetsika ireo izay ivon'ny fividianana britanika | Martech Zone
Hitanareo ve ny nataoko teo? Ity Midwesterner ity dia nampiasa ny tsipelina anglisy an'ny fitondran-tena fa tsy fihetsika. Te-hanaporofo amin'ny olon-drehetra aho hoe iza aho amin'izao tontolo izao… na tsia. Tsy mbola nankany amin'ny Fanjakana Mitambatra mihitsy aho na dia teo aza ny lova skotika sy britanika teo amin'ny ankohonan'ny reniko. (Jereo izany? Nataoko indray!)
Ok, hatsikana ankilabao (doh!), Ity dia fampahalalana tena tsara azon'ny CM Brand. Mino marina aho fa ity dia mety ho fanehoana marina kokoa ny fitondran-tena amin'ny fividianana tanàna eto Etazonia koa.
Ny fahazoana ny fihetsiky ny mpanjifa dia tsy ny fikarohana fotsiny hoe inona ny vokatra na fanomezana fampiroboroboana manao antso avo amin'ny demografika. Raha ny fahitan'ny mpivarotra azy dia tokony hidina amin'ny antsipiriany toy ny antony mahatonga ny mpanjifa manao fomba iray ao a magazay fanomezana tsy manam-paharoa, ny fomba ifampizaran'ny olona vaovao amin'ny tsirairay, ary inona ny fitaomana ara-kolontsaina na fiaraha-monina miasa amin'ny famolavolana ny fomba fijeriny. Max Baumber
Ity misy fitondran-tena tsy voatanisa ao an-tsaina rehefa mampivelatra ny paikadim-barotra any ivelany ianao (ary na dia eto aza):
Ny mpivarotra UK dia tsy mivadika - sambory ny angon-drakitra ataon'izy ireo, mifandraisa, ary ampifanaraho ireo ezaka amin'ny varotra.
UK Shoppers sarobidy, fandefasana azo itokisana ary fiverenana vokatra - hamaha ny olan'ny fandefasana ary manome fiverenana maimaimpoana mba hiroborobo amin'ny fivarotana antsinjarany.
UK Shoppers Research Products an-tserasera - miantoka ny fahafahan'ny mpanjifa mahita vaovao momba ny vokatrao amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fikarohana, sosialy ary tranokala mifantoka amin'ny vokatra feno.
Mbola zava-dehibe amin'ny fivarotana fivarotana britanika ny fivarotana - Ampifandraiso ireo fivarotana an-tserasera sy ivelan'ny Internet ho an'ny traikefa mividy tsy misy valiny ary manome valisoa ny fividianana sy ny tsy fivadihana.
Ny fahalalana ny vokatra momba ny mpiara-miasa amin'ny varotra sy ny fahaizana mahita vokatra dia manan-danja - Manomeza traikefa an-tsokosoko tsara ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny fampiofanana sy amin'ny fampiroboroboana ny solontenan'ny mpivarotra ao amin'ny magazay.
Ny Millennial Brits dia mitady fanamarinana amin'ny tambajotra sosialy - Ampitomboy ny fisian'ny marikao amin'ny media sosialy.
Mobile Shopping dia sarobidy amin'ireo vondrona mpanjifa tanora kokoa - Hatsarao ny traikefa finday ao amin'ny tranokalanao hampiakarana ny tahan'ny fiovam-po ho an'ireo mpiantsena tanora kokoa.
Ity ny infographic mamirapiratra, Fomba fividianana brits sy fitondran-tena tokony ho fantatra ny mpivarotra.
Tags: Britanglisymividy toetramividy fihetsikafiantsenana ao amin'ny magazayfitondran-tena mividy arivo taonafitondran-tena miantsena findaymividy fanamarinanafihetsika fivarotana antsinjaranyfiantsenanafanamafisana ny media sosialyukuk mpiantsenafahatokisana fivarotana ukfanjakana mitambatra